Kooxda Barcelona oo xaqiijisay dhaawaca Martin Braithwaite… (Miyuu seegayaa kulankooda furitaanka horyaalka La Liga?) – Gool FM
Kooxda Barcelona oo xaqiijisay dhaawaca Martin Braithwaite… (Miyuu seegayaa kulankooda furitaanka horyaalka La Liga?)
(Barcelona) 20 Sebt 2020. Martin Braithwaite ayaa la xaqiijiyey inuu dhaawac soo gaaray, iyadoo Kooxdiisa Barcelona uu ku soo wajahan yahay kulankooda furitaanka horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan.
Weeraryahanka Barca ee Martin Braithwaite ayaa dhaawac uu ka gaaray muruqa bowdada bidix ka hor kulanka furitaanka horyaalka La Liga ee Barcelona ay la ciyaari doonto Kooxda Villarreal 27 bishan September.
Dhaliyahan reer Danish ayaan ka qeyb qaadanin kulankii ay Kooxdiisa Blaugrana 1-0 uga adkaatay naadiga Elche Sabtidii ee Joan Gamper Trophy.
“Ciyaaryahanka kooxda koowaad ee Martin Braithwaite ayaa dhaawac uu ka soo gaaray muruqa bowdada bidix, welina waxaa socda qiimeynta dhibaatada dhaawacaas gaaray, iyadoo la eegaayo inuu diyaar noqon karo iyo kale.” ayuu u dhignaa Bayaan ka soo baxay Barcelona ee lagu qoray website-ka rasmiga ah ee Kooxda.
“Tijaabooyinkii la qaaday maanta oo Axad ah ayaa muujinaya in dhaawac uu jiro, dhaawacaas oo gaaray Tababarkii isu diyaarinta ee kulankii Sabtidii.”
Lama oga haddii uu Braithwaite seegi doono kulanka furitaanka horyaalka La Liga ee kooxda Barcelona, waxaana kooxda reer Spain ay sii dayn doontaa bayaan kale oo ay ku xaqiijinayso arrintaas marka ay baaritaannadu dhammaadaan.
Shaxda rasmiga ah ee Kooxaha Chelsea iyo Liverpool oo la shaaciyey… (Yaa ku soo bilowday kulan weyn ee ka dhacaya Stamford Bridge)